Isolezwe: Ukuvuselela Izindaba Zedijithali | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 3, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Ngenhloso yalokhu okuthunyelwe kubhulogi, ngiphumile ngathola i-iPad entsha. Ngiyazi, ngiyazi… izaba ezibuthakathaka. Eziningi ze- amaklayenti ethu babuza imibuzo nge-iPad, futhi, noma kunjalo, ngakho-ke bekuyisikhathi sokumba ngokujulile futhi uthole izithandani zomsebenzi.
Lapho nje ngifika ekhaya, ngalandwa Isolezwe, Ipulatifomu yezindaba zedijithali kaRupert Murdoch eyenzelwe ngqo i-iPad (emenyezelwe izolo). Okuhlangenwe nakho kuhlukile futhi kuyamangalisa impela. Njengomuntu omdala wephephandaba, ukuphela kwento engangikukhumbula kwakuyiphunga le-newsprint.
Izici ziyi-hybrid yazo zombili izindaba, ividiyo newebhu - futhi zisebenzise ngokuphelele izici ezisebenzisanayo zethebhulethi. Imidwebo eminingi esencwadini iyasebenzisana, namavidiyo nokukhangisa kuhlanganiswe ngokucophelela. Esikhundleni sokungabonakali, izikhangiso zimane ziyingxenye yesipiliyoni njengoba uswayipha phakathi kwezigaba namakhasi. Ubukhulu bezikhangiso buqhephula zonke izingqinamba zokukhangisa ngamabhanela.
IDaily inokujula nekhwalithi kamagazini kepha ilethwa nsuku zonke njengephephandaba futhi ivuselelwa ngesikhathi sangempela njengewebhu. Izindaba ezinhle, izithombe, ividiyo, umsindo nemidwebo ziphila lapho uthinta kakhulu, uswayipha, uthepha futhi uhlole. Isigaba sezemidlalo esenziwe ngokwezifiso sikuvumela ukuthi ulandele izikolo zakho, izithombe nezihloko zamathimba wakho owathandayo - ngisho nama-tweets wabadlali.
Okutholwe yiThe Daily wumuzwa wezindaba omusha, owenzelwe wena. Sicindezela amaklayenti ethu amaningi ukuba enze okungaphezulu kakhulu kokumane nje ukwenza indawo yabo isebenze ezikrinini zeselula namathebulethi. Ukuze usebenzise ngokuphelele lawa madivayisi kudinga ubuhlakani obuningi… ukuhlanganisa ukubumbana, ukuswayipha, ividiyo, nokunye ukuxhumana. Kudinga umkhiqizi wewebhu oqonda ngokugcwele ipulatifomu kanye nomsebenzisi. (Yebo, siyazi ukuthi asifikanga lapho ngebhulogi yethu… siyaqhubeka nokusebenza ngakho).
Lokhu kubalulekile kubakhangisi futhi kushaya imingcele yezindlela esizisebenzisile esikhathini esidlule. Iwebhu elula ye-Call-To-Action (CTA) ekhasini lokufika ezinsukwini zokuguqulwa ibaliwe. Sizosebenzisa ukubekezela kwabasebenzisi ngokuma nokuziphatha okulindelekile. Lawa madivayisi enza ukukhiqiza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kube khona okungenamkhawulo… sidinga nje amanye amathuluzi wokuthola!
IDaily iyatholakala ngesevisi yokubhalisa ye-iTunes ye-Apple nange-iPad App Store ngo- $ 0.99 ngesonto noma ngo- $ 39.99 ngonyaka. Anginakho ukungabaza ukuthi ngizobe ngibhalisile uma icala lami seliphelile!
Tags: izindaba ze-ipadIzindabai-rupert murdochnsuku zonkeizindaba zansuku zonke
Feb 3, 2011 ngo-8: 26 PM
UDoug, ubhale ukuthi: “Njengomuntu omdala wephephandaba, ukuphela kwento engangikukhumbula kwakuyiphunga lezindaba.” Njengoba i-Indy Star isebenzisa uyinki osuselwe ku-soy, ingabe i-newsprint inuka njengokudla kwase-Chinese okuthathwe?
U-Andrew K Kirk
Feb 8, 2011 ngo-1: 38 PM
Njengomuntu wezobuchwepheshe uqobo ngigaya cishe yonke into ngekhompyutha, kepha nami ngisalithanda iphephandaba eliphrintiwe elihle. Ngaphezu kwalokho, ekunukeleni, ngingeza uhlu lwezici ezihlukile ukuzizwa kwephepha phakathi kweminwe yakho njengoba uvula amakhasi.
Feb 8, 2011 ngo-9: 10 PM
Thanda isikhombimsebenzisi, kepha ubuntatheli bushiya kungathandeki. Bheka impendulo ye-App Store etholwa yi-Daily. Kumele ngithi, ngiyavumelana nabo.